N'ogbe na-ewuli akwara anabolic steroid ntụ ntụ Methenolone Acetate CAS 434-05-9 Onye nrụpụta na onye na-eweta |Taigui
Na-ewulite akwara anabolic steroid ntụ ntụ Methenolone Acetate CAS 434-05-9
Ụdị okwu: Primobolone; Primobolan depot Acetate
Standard: Ụkpụrụ ụlọ ọrụ
kpọmkwem ntụgharị °+59~°+50
Ebe agbaze: 144°C ~ 136°C
Ụdị ihe omimi: C22H32O3
Arọ molekụla: 344.4877
Ojiji: Primobolan Ọ siri ike, njikọ nke metabolism na njirimara nwoke dị ala, na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ kacha mma maka egwuregwu.
Esi nri nri
1.Primbolan Acetate (Methenolone Acetate) Ntụziaka 50ml @ 200mg/ml
10 g nke mbụ
10 mg nke BB
31.5 mg mmanụ
Onye ọ bụla mere ihe ngwọta injectable nke Primo Ace na 50mg/ml?
2.Primobolan Acetate (Methenolone Acetate) Ntụziaka 20mls @ 50mg/ml
1g ntụ ntụ
4.8 ml nke BB
12.5ml distilled mmiri
Gwakọta ntụ ntụ, BB, BA, na Poly na okpomọkụ ruo mgbe agbazere.iyo, Tinye mmiri na Re-nyo
3.Methenolone Acetate-Primo Ntuziaka Ntuziaka Injectable:
ntụ ntụ 5g
M na-eji GSO ma ọ bụ Canola mmanụ, BA, na ntụ ntụ.Anaghị m eji BB ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ.
Ntinye uche bụ 50mg / ml.
Maka arụmọrụ egwuregwu Ọ na-enyere aka ichekwa ọkwa anụ ahụ dara ada ugbu a. Ọ na-eme ka ike mmadụ dịkwuo mma.
Ọ na-eme ka ntachi obi dịkwuo mma.
Ọ na-eme ka mbelata abụba ngwa ngwa.
Primobolan n'oge oge igbutu anụ ahụ Ọ na-echebe ma na-enye aka n'ihu n'ịzụlite anụ ahụ dị adị.
Ọ na-enyere aka ịkwado ọkwa ike dị ugbu a.
Ọ na-eme ka mmebi nke abụba dịkwuo mfe.
Ngwongwo na-ere abụba Primobolan na-ejikọta ike na ndị na-anabata androgen si otú ahụ na-eme ka usoro ọkụ na-ere abụba dịkwuo elu.N'ihi nke a, ị ga-emesị tufuo abụba karịa ma mee ka ahụ ike dịkwuo elu.
Njide nitrogen emelitere Primobolan nwere ike ịkwalite njide nitrogen nke ukwuu nke na-enyere aka ichebe mọzụlụ n'oge usoro mmebi abụba.Ọ na-ahụ na ọ bụ naanị abụba na-agbajikwa ma mọzụlụ na-adịgide adịgide.
Na-akwalite njikọ protein Protein dị mkpa maka iwulite mọzụlụ.Ha na-eweghachi eriri akwara ma na-akwalite uto.Steroid anabolic dị ka Primobolan na-akwalite mmepụta protein maka uto akwara ngwa ngwa.
Na-akwalite mmepụta mkpụrụ ndụ ọbara uhie Mkpụrụ ndụ ọbara uhie na-ebuga oxygen na anụ ahụ niile.Primobolan na-akpali mmepụta nke mkpụrụ ndụ ọbara uhie, nke na-enye moreoxygen na anụ ahụ.Ịbawanye ikuku oxygen na-enyere ahụ aka ịgbake ngwa ngwa site na ọrụ siri ike.N'ihi ya, ntachi obi gị, ike gị na ume gị ga-akawanye mma.
Nsogbu dị na primobolan bụ ọnụahịa vs. uru nsonaazụ.Ịkwesịrị iji oke doses dị elu iji nweta nsonaazụ dị mma.
Maka ụmụ nwoke:injectable dosages kwesịrị ịbụ 600-800mgs kwa izu ma ọ bụ karịa, na ọnụ dosages kwesịrị gburugburu 75-100mgs kwa ụbọchị.
Maka ụmụ nwanyị: M na-atụ aro iji naanị ọnụ primobolan.Ihe dị ka 10mgs kwa ụbọchị yiri ka ọ bụ ezigbo ego ịmalite.Ị ga-egwu na onunu ogwu ma ghara ịgafe 20mgs kwa ụbọchị.
Usoro ọgwụgwọ Methenolone Acetate
*** Ezi dose nke Primobolan n'ụdị injection bụ 200-300 mg kwa izu.Ọ bụrụ na ịchọrọ iji Primobolan ọnụ ọnụ, 50-150 mg kwa ụbọchị bụ usoro akwadoro.
*** Maka ụmụ nwoke, 50-100 mgs kwa ụbọchị bụ nke ziri ezi yana usoro ọgwụgwọ n'ezie site n'ọnụ, mana maka ụmụ nwanyị, 10-25 mgs / ụbọchị bụ oke kachasị.
*** Ọ bụrụ na ị ga-enye ha dị ka injections, usoro kachasị mma maka injection Primobolan bụ 350-600 mg kwa izu maka ụmụ nwoke.Ụmụ nwanyị ga-etinye 100 mg kwa izu nke Primobolan.
*** Primobolan injectable ndụ nọ n'ọrụ dị ihe dị ka ụbọchị 10-14, ebe ndụ ọrụ nke ngwaahịa a n'ụdị mbadamba dị nso awa anọ na isii.Oge njirimara ya bụ izu 4-5.
1) okirikiri na-enweghị nnwale:
- Primo 600-800mg kwa izu 1-12;Anavar 60mg n'ime otu izu 1-8
- Primo 600-800mg kwa izu 1-12;Tren Ace 75mg / izu 1-6
- Primo 800mg izu site n'izu 1-12;Masteron 400-600mg / izu 1-14
- Primo 1000mg kwa izu ruo izu 20 (dị ọnụ)
2) Ihe ọmụmụ Primo nwere ule:
- Primo 600mg izu n'izu 1-12;Nwalee enanthate 500mg n'izu n'izu 1-12
- Primo 600mg izu n'izu 1-12;Nyocha prop 100mg kwa izu 1-14;Tren enanthate 300-400mg / izu 1-10 (Mkpụrụkpụ ịkpụ dị mma maka onye ọrụ dị elu).
Nke gara aga: Ọgwụgwọ ọrịa kansa steroid anabolic ọnụ Fluoxymesterone Halotestin CAS 76-43-7
Osote: Ọnụ anabolic steroid ntụ ntụ Oxandrolone (Anavar) maka rFat Burning